I-GetProspect: Thola amakheli e-imeyili e-B2B bese uphatha uhlu lwama-Prospect | Martech Zone
I-GetProspect: Thola amakheli e-imeyili e-B2B bese uphatha uhlu lwama-Prospect
NgoLwesihlanu, Okthoba 2, 2020 NgoLwesihlanu, Okthoba 9, 2020 Douglas Karr
Noma ngingathandi ukwenziwa ugaxekile, kuzofanele ngivume ukuthi kunezikhathi lapho abantu bathole ikheli lami le-imeyili futhi bangithinta ngebhizinisi elisemthethweni. Eqinisweni, ngiqashe osonkontileka abambalwa futhi ngathenga amapulatifomu ambalwa kulawa ma-imeyili angacelwanga athunyelwe kimi.
Lokho kusho ukuthi, ngilindele indlela yokuhlonipha kulokhu ukuxhumana:
Ucwaningo - Ngifuna ukwazi ukuthi ngikhonjwe ngokukhethekile ngenhloso ethile.
Ukwenza okuthandwa nguwe - Ngifuna lowo muntu angazise kahle ukuthi bekuyini leyo njongo kanye nalokho abakulindele.
Khetha ukuphuma - Ngifuna izindlela zokuphuma ekuncengweni futhi ungalokothi uthole enye i-imeyili uma ingasebenzi.
Isitholi se-imeyili se-GetProspect
Esikhathini esedlule, ngenze futhi (i-gasp) engacabangi futhi uthenge uhlu lwe-imeyili ngobuningi. Kuyimboni yokudweba ngempela, noma kunjalo, ngakho-ke amathuba akho okulimaza isithunzi sakho nokuvalwa ngumthengisi wakho we-imeyili aphezulu. Uma wenza lokhu, uqhuba kangcono uhlu ngokusebenzisa ithuluzi lobuhlakani be-imeyili ukuqinisekisa ukuthi awungenisi ama-imeyili kanye nama-imeyili azobamba ogaxekile.
I-GetProspect iqoqo eliseshekayo le amakheli e-imeyili kuhlanganiswe nenjini yezobunhloli egcina amarekhodi esesikhathini. Mane ufake izinqubo zakho zokusesha kanye ne-imeyili yethu yokukhipha izonikeza uhlu lwamagama ngama-imeyili ezinkampani, isikhundla, i-URL yephrofayili ye-LinkedIn, igama lenkampani, imboni, iwebhusayithi, nokunye okuningi!
Ukuphathwa kwe-GetProspect Prospect
I-GetProspect inikeza isikhombimsebenzisi esihle sokungenisa, ukusesha, ukuhlunga, ukuhlela, nokuthekelisa amathemba akho.
Izici ze-GetProspect Prospect Management Izici zifaka phakathi:
Izinhlu - Qoqa amaphrofayili akho akhishiwe abe uhlu. Oda ngegama, inkampani, isikhundla, njll.
Ukuhlanganiswa - Ngenisa noma uthumele amathemba akho kuzinhlelo zokusebenza ezingaphezu kuka-750 kufaka phakathi i-Linkedin, i-Salesforce, i-Pipedrive, i-Zoho CRM, i-Mailchimp, i-Mailgun, ne G Suite.
Team - Ungamema iqembu lakho ukuthi labelane ngohlelo lwakho lokusiza ukuthola amathuba ngokushesha.
Thumela ku-Excel - Thumela othintana nabo kufayela le-XLS ngama-imeyili akhishiwe nolunye ulwazi.
Ukungenisa Inqwaba - Thola uhlu lwama-imeyili ngasikhathi sinye. Vele ungenise amafayela aqukethe amagama nolwazi lenkampani bese uthola ama-imeyili ngobuningi.
Company Info - Thola imininingwane ewusizo njengewebhusayithi yenkampani, ikheli lendawo nenombolo yocingo, usayizi wenkampani, inani labasebenzi, nokuningi.
Bhalisa Futhi Uthole Amakheli E-imeyili E-200 Mahhala
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuhambisana ne I-GetProspect - sebenzisa ikhodi 6rE12 ukuze uthole amakheli e-imeyili angama-200!
Tags: b2bthola ikheli le-imeyilithola amakheli e-imeyilithola amakheli e-imeyili kusuka ku-linkedinumabhebhanagsuiteLinkedInsalesforce
I-Freshmarketer: Hlaziya, Vivinya, futhi wenze ngezifiso ngale Suite Yokuguqula Ukusebenziseka